पशुपतिनाथमा माछामासु, गाँजा बिक्रीवितरण र सेवन निषेध, दर्शन गर्न कहाँ-कहाँबाट लाइन बस्ने ?
काठमाडौं- पाश अर्थात् बन्धनमा रहेकालाई मुक्ति दिने पशुपतिनाथको दर्शन गर्न देशविदेशका साधुहरू आउने क्रम बढ्दैछ । स्वदेश र विदेश गरी भारतका विभिन्न मठमन्दिरका साधु, स्वामी तथा योगीहरू पशुपतिनाथ, डोलेश्वर, कालमोचन घाट आदिमा बस्ने गर्छन् ।
शिवरात्रिका लागि केही दिनदेखि नै पशुपति क्षेत्रलाई रङरोगन गरेर सजाउने कार्य भएको छ । शिवको दर्शनका लागि एकादशीदेखि नै पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । शिवरात्रिकै लागि भनेर नेपाल र भारतबाट चार हजार साधुसन्त तथा जोगीहरु पशुपति क्षेत्रमा भेला भइसकेको सदस्य ढकालले बताए ।
नेपाल प्रहरीको अगुवाइमा सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समेत सुरक्षाकर्मी मेला अवधिभर परिचालन गरिने डा. ढकालले बताए । भक्तजनलाई हुनसक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर नजिक हुने गरी मुख्य क्षेत्रमा चिकित्सक, परिचारिका, औषधि र शय्यासहितको नेपाली सेनाको मूल स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने छ । एम्बुलेन्स कुनै बेला पनि रहने गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित करीब ५० संस्थाले सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
साधुसन्तका लागि आवश्यक नि:शुल्क भोजन, पानी, चिया र बसोबाससमेतको व्यवस्था मिलाइएको छ । चिसोबाट बच्नका लागि धुनी जगाउन दाउराको व्यवस्था पनि मिलाइएको कोषका मुख्य लेखा अधिकृत प्रेमहरि ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार महाशिवरात्रि पर्वको पर्सिपल्ट एकादशीका दिन बाटो खर्चसहित साधुसन्त, जोगी–बाबाहरूका लागि बिदाइको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ । यस्तै दर्शनका लागि अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष खालको व्यवस्था रहेको र अन्यका हकमा लाममै बसेर दर्शन गर्नुपर्ने अधिकृत ढुङ्गानाले औंल्याए ।
पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि तिलगङ्गा (गल्फकोर्स उत्तरतर्फ) एक, पशुपति क्षेत्र विकास कोेषको कार्यलयमा एक, महानगरीय प्रहरी वृत्त/ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, गौशाला एक, सिफल एक र गुहेश्वरी पारि एक गरी पाँच स्थानमा पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै एअरपोर्ट, गाौशाला, चाबहिल चक्रपथमा दर्शनार्थीको चापलाई ध्यानमा राखी एकातर्फी सवारी गुड्न दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको कोषले जनाएको छ । शिवरात्रिमा पशुपति दर्शन गर्न आउने दर्शानार्थीका लागि सहज व्यवस्था मिलाउन यस वर्ष कोषले आठ उपसमिति गठन गरी तयारी शुरू गरेको थियो ।